> Resource> iPhone> Olee naghachi Photos Naanị site na iPhone ndabere
Banyere iPhone ndabere
Dị ka iPhone ọrụ, nza nke ndị na-eji iTunes jikwaa data na ha iPhones. Mgbe ị na-mmekọrịta ndị iPhone na iTunes, ị ga-chọpụtara na iTunes mgbe niile Akwadoo elu data gị iPhone mbụ. Ee, nkwado ndabere na mpaghara faịlụ bụ gị iPhone ndabere. Ihe ị chọrọ ịma bụ na iTunes na-emekarị na-eme ka otu ndabere faịlụ maka ihe iPhone. Nke ahụ bụ ikwu, sị, ọ bụ naanị mmelite nkwado ndabere na mpaghara faịlụ mgbe ị mmekọrịta ndị iPhone na ya mgbe e mesịrị.
Ọzọkwa, ọ na-adịghị ekwe ka ị ihuchalu ma ọ bụ na-data nke ndabere. Mgbe ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara data, i nwere ike na weghachi dum ndabere gị iPhone na-eji dochie nile dị na data na ya. Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ nanị photos na iPhone ndabere?
Olee otú naghachi dị nnọọ foto site na iPhone ndabere
Ị nwere ike kpọmkwem na-foto site na iPhone ndabere, ọbụna na ị na-ahụ ya na kọmputa gị. The iPhone ndabere na-adịghị ekwe ka ịhụchalụ. Ị pụrụ 't emeghe ya ozugbo. Ka ịhụchalụ ya, ị mkpa ịdabere na a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery), nke nwere ike inyere wepụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Mgbe ahụ ị pụrụ ịhụchalụ na selectively naghachi foto site na iPhone ndabere. Ndị ọzọ data nwekwara ike-natara ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Ọ bụ ezigbo mfe. Ị na-adịghị mkpa nwere ihe ọ bụla nkà ọkachamara ma ọ bụ kọmputa ihe ọmụma. Dum usoro na-ewe 2 nzọụkwụ. Ihe niile ị chọrọ ime na-ike iṅomi, ifiọk na-agbake. Ka ibudata ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị mbụ.
N'agbanyeghị na ị na-eji a Windows kọmputa ma ọ bụ a Mac, usoro bụ nnọọ yiri. Dị nnọọ download kwekọrọ ekwekọ version maka kọmputa gị. Wụnye na-agba ya iji weghachi foto site na iPhone ndabere site na isoro ntuziaka n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Wepụ gị iPhone ndabere faịlụ
Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume, na-aga nke ọzọ mgbake mode: Naghachi si iTunes ndabere Njikwa, na n'elu nke isi window. Mgbe ahụ software ga-akpaghị aka ịhụ niile iPhone ndabere faịlụ ẹdude na kọmputa gị, chee ha dị ka a ndepụta na window. Ugbu a, i kwesịrị ịhọrọ otu maka gị iPhone, ma ọ bụ onye ị chọrọ wepụ. Wee pịa na Malite iṅomi button na-amalite.
Nzọụkwụ 2. Weghachi foto site na iPhone ndabere
Mgbe ihe omume ahụ okokụre adịrị ndị iPhone ndabere, ị nwere ike na-amalite Michael niile data gị iPhone ndabere ugbu a. All ọdịnaya na-nkewa n'ime iche iche dị ka igwefoto mpịakọta, foto iyi, kọntaktị, ozi na otú pụta. Ewepụta foto site na iPhone ndabere, ị nwere ike ihuchalu ha na igwefoto Roll na Photo Stream otu otu. Tinye akà rà na ihe ị chọrọ na-azọpụta ha na kọmputa gị site na ịpị Naghachi.
E wezụga ẹdude foto na iPhone ndabere, Wondershare Dr.Fone maka iOS na-ahapụ gị naghachi ehichapụ foto site na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ, nke ị na-apụghị-enweta site na ozugbo Iweghachi na iPhone.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS, ị pụrụ iji ndị ọzọ mgbake mode: Naghachi ụdị iOS Ngwaọrụ, ka kpọmkwem iṅomi gị iPhone na-agbake ehichapụ photos na ya.
Ụzọ ise banyere otú nyefee songs / music si iPhone ka iPhone
5 Ụzọ maka Olee otú iji Chọta IMEI on iPhone
Otú nyefee Audiobook site na kọmputa na-iPhone enweghị iTunes